Nhau - Gamuchira noushamwari Mr. Paul Wang, Sachigaro weC & W International Fabricators veUnited States kuti vashanyire kambani yedu, uye vape nhungamiro kubasa redu.
Noushamwari VaPaul Wang, Sachigaro weC & W International Fabricators veUnited States kuti vashanyire kambani yedu, uye vape nhungamiro kubasa redu.
Na9: 00 mangwanani musi waKurume 7, Paul Wang, Sachigaro weC & W International Fabricators veUnited States, vachiperekedzwa naZhong Cheng, maneja webazi reShanghai, vakauya kuCepai Group kuzoshanya nekuferefetwa. Mr. Liang Guihua, Sachigaro weCepai Boka, nemufaro vakaperekedza.
Kubva 2017, epamba uye epasi rose peturu peturu michina chigadzirwa musika yawanazve, uye kudiwa kwepamba peturu michina, mavhavha uye zvishongedzo zvigadzirwa mumisika yekunze zvakawedzerawo, izvo zvakaunzawo Cepai Group kusangana nemikana mitsva nematambudziko.
Mukana uri mumirairo iri kuwedzera, nepo dambudziko riripo mukuda kwekugara uchivandudza simba rakazara rekambani kuti ugone kurarama nekuchinja kuri kudikanwa kwemusika.
Sachigaro Wang, achiperekedzwa nevehunyanzvi, mhando uye manejimendi manejimendi vashandi veCepai Boka, vakanyatso shanyira uye vakaongorora maitiro ese kubva pakugadzira zvinhu kusvika pakupedzisa, kupisa kurapwa, kuungana uye kuongorora. iyo nzira yekugadzira kuve nechokwadi che100% yekuyera mwero wezvigadzirwa nezvimwe.
Sachigaro Wang akafara uye akagutsikana neicho chese chiitiko chekuongorora. Aivimba zvakazara musimba reCepai rekugadzira uye kuvimbiswa kwemhando yepamusoro, uye akataura kuda kwake kutanga kudyidzana kwenguva refu nesu. Cepai ichave zvakare icing pane keke pamwe nekubatana kweC & W kambani!
Post nguva: Sep-18-2020